Rakotomanga Eric : “manaiky ny vahiny isika” | NewsMada
Rakotomanga Eric : “manaiky ny vahiny isika”
“Ny tena mahagaga: ny mpanao politika malagasy mihevitra ny tenany fa mbola ampianaran’ny vahiny amin’ny fanaovana politika eto an-tanindrazany”, hoy ny filoha nasionalin’ny AKFM, Rakotomanga Eric, momba ny fanofanan’ny vahiny ny mpanao politika malagasy amin’ny fanaovana politika hatramin’izay.
Efa mahazatra ny Pnud sy ny FES, ohatra, ny fampianarana politika ny mpanao politika malagasy. “Tsy tokony hohadinointsika fa ry zareo FES no nanangana sekoly fampianarana politika voalohany teny Maibahoaka Ivato, izay nampianarana ny PSD”, hoy izy. Heverin-dry zareo izany fa tokony hotohizana izany hatramin’izao.
Foto-kevitry ny sosialy demokrasia no ampianarina ao anatin’izany. Mazava fa ny mampiely izany ideolojia izany no tena andraikiny. Ny mahagaga, tsy mitsaha-mitsabaka amin’izay fampianarana ny mpanao politika malagasy izay ry zareo. Hatramin’ny Repoblika I izany ka hatramin’izao.
Tsy ny momba ny politika ihany no tsabahin-dry zareo
Tsy ny momba ny politika ihany no tsabahin-dry zareo fa anatin’izany ny asan’ny sendikà sy ny firaisamonina sivily, ny fanaovan-gazety… Tsy vitan’ny hoe mampianatra ry zareo amin’izany, fa maneho hevitra ny fomba fahitany azy.
Ahoana no ieritreretana hoe mety amin’ny sosialy demokrasia malagasy ny sosialy demokrasia any Alemaina? Tena mandala ny sosialy demokrasia avokoa ve ireo mianatra ireo? “Ny fahafantaranay azy, betsaka ireo antoko amin’ny ankavanana. Marina fa misy koa izay lazaina hoe antoko ankavia”, hoy izy.
Ny AKFM manokana, nanoratra taratasy ofisialy tany amin’ny Pnud, tamin’ny taona 2016, raha nanomboka io fampianarana hoe araka ambaratonga io ry zareo. “Tsy mifanaraka velively amin’ny foto-pisainana malagasy ny ataony, ka laviny ny fandraisana anjara amin’ny fampianarana toy izany”, hoy ihany izy.